TOE-PO: Martin Vrijland
Mba hanohizana ny fanohanana anao dia ilaina maika. Amin'ny fidirana amin'ity tranokala ity dia manohana ny asan'i Martin Vrijland miaraka amin'ny fanomezana. Raha tianareo ihany koa olona an-tapitrisany no afaka mamaky fomba fijery hafa momba ny vaovao isan-taona, dia raisina tsara ny fanohananareo. Miankina aminao ny habetsahan'izay tianao homena. Amin'ny maha-mpikambana anao dia manampy ahy ho tafavoaka velona na dia eo aza ny fanafihana rehetra ataon'ny olona.
Hiditra mba hanavao na hanovana mpikambana efa misy.
Avereno ny tenimiafina
Mifidiana ny isan'ny mpikambana anao
Mpikambana volana - € 2,00 - Volana 1
Lasa mpikambana ianao ary manome € 2 isam-bolana
Mpividy mpikambana iray isam-bolana - € 5,00 - Volana 1
Lasa mpikambana ianao ary manome € 5 isam-bolana
Volana volafotsy volana - € 10,00 - Volana 1
Lasa mpikambana ianao ary manome € 10 isam-bolana
Volamena volana - € 20,00 - Volana 1
Lasa mpikambana ianao ary manome € 20 isam-bolana
Taona - € 25,00 - manam-petra
Lasa mpikambana ianao ary manolotra € 25 isan-taona
Mpividy mpikambana taona - € 65,00 - manam-petra
Lasa mpikambana ianao ary manolotra € 65 isan-taona
Volana volafotsy - € 125,00 - manam-petra
Lasa mpikambana ianao ary manolotra € 125 isan-taona
Volamena - € 250,00 - manam-petra
Lasa mpikambana ianao ary manolotra € 250 isan-taona
Fidio ny fomba fiasanao
PayPal	 Credit / Debit Card	 Fanangonana fanangonan-tsonia (fanomezan-dàlana avy amin'ny iDEAL)
Manaiky ny politika manokana aho
Total visits: 12.335.613
Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersma ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Ny asterisk Disney Channel teo aloha dia nilaza fa nisy nanararaotra ny pedofy any Hollywood
Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny!
Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
Martin Vrijland op Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersma ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
Camera 2 op Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersma ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
Mifandraisa anjara amin'ny 1.635 hafa